Suugaanta – Saraar Media
+21-4 Ismaaciil Xayd Xirsi (HA/ Sacad Muuse) oo “Aflow” ku magac dheeraa wuxuu ahaa abwaan weyn oo suugaan-yahamiinta Soomaliyeed ku halqabsan jireen. Cabdillaahi Suldaan Timacadde oo ku halqabsanayaa waa kii lahaa; Mudanoow Afloow iyo sidii Muxumud maw sheegay Muxumudna waa Ninkii caanka ahaa ee Muxumud Liibaan Jadeer oo ahaa Macallin maansa yahayn ah. Ismaaciil Xayd ...
Gabay; Gaybgan wuxuu ku saabsanyhay “Geela” waxaa tiriyey Abwaan ( Qawdhan Ducaale, Ciida Gale)
+28-5 Geela Qawdhan Ducaale, (Idagale) Gabaygan wuxuu abwaanku ku sifaynayaa geel ay soo dhaceen. Geel dhicistu ma dhicin laakiin abwaanku wuxu si habsami leh oo murti xanbaarsan u metelayaa sidii ay geel u soo meersadeen. Qawdhan Ducaale oo ka mid ahaa abwaanada dalkeenna kuwa ugu waaweyn, nasiib darro iima suuragelin inaan gabayo badan ka helo ...